Wasiir Arslan Wanaagsan! Sarkaalka TCDD 700 wuxuu sameyn doonaa Soo iibsi! | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaInjiilka ka yimid Wasiirka Arimaha Bulshada! Sarkaalka TCDD 700 ayaa iibsan doona!
07 / 08 / 2017 Shaqooyinka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD, Gaadiidka TCDD
Wasiirka Gaadiidka, Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan'dan PTT, TCDD iyo sharraxaada qoritaanka wadooyinka waa weyn ayaa yimid. Waa tan macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan shaqaalaysiinta Wasiir Arslan.
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa siiyay macluumaad ku saabsan shaqaalaha la geyn doono Wasaaradda sida lagu sheegay hadalkiisii ​​maanta. Wasiirka Arslan PTT'ye shaqaalaysiinta shaqaalaha, sidoo kale Agaasimaha Guud ee Gobolka Tareenka iyo Wadooyinka Waaweyn ayaa ku dhawaaqay shaqaalaysiinta shaqaalaha.
Faahfaahinta gudaha iyo tan qaran ee mashruucan oo ay la wadaagaan Wasiirka Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, ayaa shaaca ka qaaday in mashruucan la hirgalin doono dhamaadka sanadka soo socda, nidaamka ayaa loo gudbin doonaa iyada oo aan dibadda loo bixin oo la bixin doono isgaarsiin aamin ah, ayuu yiri.
Sida uu sheegayo wasiir Arslan, adeegsiga e-maylka qaranka ayaa qasab ku noqon doonta xarumaha dawladda iyo ururada qof walbana wuu isticmaali karaa, ayuu yidhi.
Wasiir Arslan wuxuu yiri, madal waa goob ay macluumaadku ka socdaan gudaha iyo dibaddaba iyadoon la wareegin. Sidaas badan oo ka mid ah aqoon ka badan ayaa lagu kalsoonaan karo si nabad ah oo aan ka tagin qofka heli doonta diirada dalka Turkiga. Nidaamka e-maylka maxalliga ah iyo kan qaranka si loo shaqeeyo illaa dhammaadka 2018 dhammaan hay'adaha dawliga ah iyo ururraduba way awoodi doonaan inay adeegsadaan. ”Ayuu yidhi.
Dhanka kale, Wasiir Arslan, PTT'ye 2 kun 500 shaqaale qorista 15 ayaa la sameyn doonaa sida bisha Agoosto, halka Tareenka Gobolka 700 iyo 640 dadka loo qori doono iyaga oo sheegaya in Agaasinka Guud ee Shaqada uu siiyay warka wanaagsan.
Isha: www.kpsscafe.com.t waa
Booqashada Sarkaal-Sare ee Wasiirka Arimaha Carada
Warka wanaagsan ee laga helay Wasiirka Elver si loo xalliyo dhibaatada gaadiidka ee Istanbul
3 oo ka socda Wasaaradda Arimaha Bulshada. sharaxaadda garoonka
Wasiirka Arimaha Dibadda oo ku dhawaaqay Mashruuca BTK Railway
Injiilka Erzurum oo ka socda Wasiirka Arimaha Bulshada
Wasiirka Arimaha Dibada oo ka hadlay Xarunta Soomaliga ee Karaman
Inuu ku dhawaaqay saldhigga hoose ee ULAK injiilka wasiirka arimaha dibada
Wasiirka Arimaha Dibada ee PTT
Trabzon waa marxalad aad u habboon ee Nidaamka Tareenka fudud